Kuyini isipiliyoni yezokwelapha okuqhubekayo? Ubhekene necala nokuthi ingabe kunengqondo kule ingxenye zabasebenzi we abasebenzi bezempilo? Zonke lezi imibuzo ezithakazelisayo, lapho umuntu uya owanikezela ukuphila kwakhe imithi. Le ndawo umsebenzi kuyinto wemfanelo kakhulu futhi sina. Ngakho-ke, izici okukhulunywa ungalindela ezinye izibonelelo amabhonasi. Indlela eziyimbangela yalokhu eRussia? Yini bangalindela kodokotela kuleli zwe?
Ngeshwa, ngokuqhubeka nomqondo abanolwazi kwezokwelapha akuyona njalo sobala izakhamuzi. Futhi hhayi kuzo zonke izimo kungenzeka ukubala ubude ngendlela efanele.
Okuqhubekayo yezokwelapha isipiliyoni somsebenzi - lesi yisikhathi ukuthi umsebenzi uye wasebenza emkhakheni wezokwelapha, kuyilapho kuphela ukumisa okwesikhashana zungu ngokusemthethweni umsebenzi. Ngokwesibonelo, sekhefu lonyaka.
Ukuqhubeka komsebenzi nesipiliyoni emkhakheni wezokwelapha linendima ebalulekile kwabaningi. Phela, le nkomba kusiza ukuthola amaphilisi athile ukuba nokuzimisela iholo. Futhi akusiwona mayelana amaprimiyamu. Iziphi izici zigcwele Ngokuqhubeka abanolwazi kwezokwelapha? Yini okufanele I sinake? Futhi lokho supplements ukubeka abasebenzi ngaphansi kwezimo ezithile?
Ake sicacise nesimo lapho isipiliyoni umsebenzi ayoshaywa indiva aphazamisekile. Iqiniso lokuthi leli phuzu kubaluleke kakhulu. Uma wephula ukuqeqeshwa okuqhubekayo zokwelapha konke amabhonasi kanye nezibonelelo zinyamalale futhi lesi sisebenzi kunobungozi ukuhlala ngaphandle zimali eziseceleni ezikhokhiswayo.
Okwamanje eRussia, Ngokuqhubeka abanolwazi kwezokwelapha sigcinwe ngaphansi isimo sokuqashwa ngaphandle izinkathi abangasebenzi ehlala njalo ngaphezu kwenyanga. Kodwa kulokhu kubalulekile ukuba ukushintsha Ububanzi bemisebenzi. Lokho, uma ngabe sisebenti yanquma ukushintsha indawo yomsebenzi, angakwazi ukukwenza. Nokho, ukuqinisekisa ukuqhubeka abanolwazi kwezokwelapha kuyadingeka ukuze uqhubeke ukusebenza imisebenzi esemthethweni emkhakheni wezokwelapha.
Kunakeni lokho kubhekwe njengento nezikhathi libalwa isipiliyoni umsebenzi :
"Ukuhlaba Ikhefu" okukhulelwa kanye ngenxa yokuzalwa oluzayo;
ukungenela inkonzo yezempi ngenxa ucingo esiphuthumayo;
ukudlula inkontileka isevisi;
umsebenzi ohlukile emabuthweni ahlomile we Russian Federation;
kwenkathi ekunakekeleni abakhubazekile nasebekhulile abaye efinyelela eminyakeni yobudala engu-80.
Ngo idatha nezikhathi ekunqanyulweni kwe nokwenziwa kwemisebenzi esemthethweni ngeke kubhekwe ikhefu ukuziphatha komsebenzi. Ngakho, bonke izibonelelo amabhonasi uyakusindiswa umsebenzi ngamunye.
Kuye kuthiwe ukuthi ukuxoshwa - hhayi umusho ngokuqhubeka umsebenzi. Lokhu kuvamile. Bonke abasebenzi uvumele isikhathi esithile ukuze ufune umsebenzi omusha futhi ngaleyo ndlela akwazi buthelela inkonzo eqhubekayo. Kodwa kanjani ukuba umsebenzi emkhakheni wezokwelapha? Singakanani isikhathi kunikezwa ucinge indawo entsha lomsebenzi?
abanolwazi kwezokwelapha Okuqhubekayo emva osenyameni iqhubeka izinyanga. Phakathi nalesi sikhathi, izakhamuzi kumele aphinde aqale umsebenzi kokuqhuba emkhakheni wezokwelapha. Akunjalo ngempela ngesikhathi esifanayo abasebenza njengoba udokotela noma ukufuna umsebenzi ezindaweni eziphakemeyo. Into eyinhloko ukusebenza futhi ibhaliswe njengoba abasebenzi bezokwelapha.
Ngenxa yalokho, bonke izibonelelo izohlala - kungenzeka ukuba ungakhathazeki. Kodwa ubungako bawo Ungashintsha. Phela, kukhona esisodwa esibalulekile ukuthi kuthinta usayizi amabhonasi oyizuzayo. Mayelana naye ngemva kwesikhashana. Isinyathelo sokuqala ukuthola indlela ukugcina phambili umsebenzi.
Ukuncipha kanye nokuqedwa
Ngezinye izikhathi kuvela ukuthi indoda ephelelwa umsebenzi wakhe ngenxa ukunciphisa abasebenzi, noma ekucwileni ezikweletini kwanoma inkampani. Kanjani ukuba ngaleso sikhathi? Singakanani isikhathi ungakwazi ukuyofuna umsebenzi omusha?
abanolwazi kwezokwelapha Okuqhubekayo emva zincishiswe noma ukuqedwa inhlangano ihlala izinyanga 3 kusukela ngosuku kwemsebenti. Ukuze uthole indawo omusha engase ngiwutholile sakhamuti izinsuku ezingu-90. Nalapha futhi, kubaluleke kakhulu ukuba silondoloze yomsebenzi emkhakheni wezokwelapha, noma umane ngeke phambili.
It lingahunyushwa baphetha ukuthi ngaso sonke isikhathi inkonzo eqhubekayo emkhakheni wezokwelapha ngemva ukuxoshwa kwakhe kulahleka. Ngakho, ngethemba ngaphansi kwezimo ezithile, ngokuba izibonelelo amabhonasi olunikezwa umthetho.
Ubukhulu yabo ngqo, ngeshwa, kunzima ukubala. Kukhona ithuba lokuthi ngemva kokuba inkokhelo esilandelayo umsebenzi noma ukwanda noma ukwehla. Kodwa cishe ngeke zihlala zinjalo.
Umbuzo olandelayo, okuyinto iyathakazelisa eziningi - kuyinto umsebenzi entsha isikhungo sokwelapha. Iqiniso liwukuthi manje kungenzeka ukwehlukana yonke imisebenzi wezinto ambalwa. Ukwabela izikhungo zezempilo zikahulumeni nezizimele. Ingabe umsebenzi endaweni ethile phezu izibonelelo inkonzo eqhubekayo?
Hhayi ngaso sonke isikhathi. On izinkokhelo ngokuvamile - yebo, kodwa isipiliyoni - akukho. Ngamanye amazwi, isipiliyoni esiqhubekayo yezokwelapha ngemva labadubuli, isib, emitholampilo yomphakathi kanye umsebenzi esibhedlela esizimele uyaqhubeka. Futhi okuphambene nalokho. Into eyinhloko ukugcina ngaphakathi kwesimo isikhathi setha eRussia ezingeni zomthetho.
Zonke kufanele ngikhokhele
Ezinye uyazibuza ngqo ukuthi abasebenzi ukubeka mali umsebenzi okuqhubekayo emkhakheni wezokwelapha. Ingabe indima isikhundla wayeqamba le mali?
Umbuzo kunzima. Ngokuvamile, a lot of izici unomlando yezokwelapha okuqhubekayo. umthetho Russian icacisa ukuthi isikhundla lunendima kulesi sibalo inkokhelo nenzuzo. Kodwa akukho yokuthi othile ngesibonelelo, futhi abanye ungapheli. Bonke abasebenzi babe eside futhi okuqhubekayo isikhathi zokusebenza emkhakheni wezokwelapha, e elithile noma ngenye indlela kuyovuzwa.
Into kuphela ukuthi kuthinta isikhundla isisebenzi, - usayizi eziqoqwe. Futhi akukho lutho ngaphezulu. Ngakho ungakhathazeki mayelana nokulahlekelwa seemali ezibhadelwako ezingezelelweko, ngaphandle uma udokotela isidlulile isimo umsebenzi esigabeni kwabahlengikazi. Zonke izinhlinzeko zoMthetho amabhonasi ngokuqhubeka abanolwazi kwezokwelapha zisazohlala.
Esithinta inani izinkokhelo
Kubalulekile ukuqonda nokuthi kuthinta inkokhelo ngomsebenzi kwezokwelapha. Kuye kuthiwe ukuthi akukho amanani icaciswe wabeka ukuthi akhokhela i- elithile noma ngenye indlela izisebenzi zezokwelapha. Kodwa kukhona izinto ezithinta ke, lokho kuyoba ukuphela ubude okuqhubekayo ibhekwa wezokwelapha. Ziyakwazi:
indawo yokusebenza umsebenzi;
Uma ngisebenza emkhakheni wezokwelapha;
I iphuzu elibaluleke kakhulu elokugcina. Bonke abanye - kuba izici ezincane kuphela kutholakale izinga engenile ngumsebenzi. Nokho, kwezinye izimo, zonke izinkomba ukudlala indima efanayo.
Ngakho, ayanda iholo - siyoba sikhulu ukukhokhelwa. Kusuke kufanele kube njalo. Phela izibalo abazenzi njengoba amaphesenti nomholo atholakala. Lokhu kusho ukuthi angabonelela abanolwazi kwezokwelapha okuqhubekayo kungenzeka kube inani elifanayo lemali. Yonke indawo emholweni wakho. Futhi kuwo kakhulu yeyeme yokukhokha.
Futhi kudlala indima ebalulekile isikhathi nakho yezokwelapha okuqhubekayo. Akunzima ukuqagela ukuthi eside umsebenzi asebenza, le zimali eziseceleni ezikhokhiswayo ephakeme. Ngakho-ke, okwamanje, futhi, akufanele silithathe kancane. Kuyinto yalesi sizathu iba ezinkulu lapho enza isinqumo ngokuphathelene umsebenzi olwengeziwe umsebenzi sichithiwe. Izibonelelo abafuni ukulahlekelwa kakhulu!
Indlela Charge izindleko ezengeziwe edingekayo? Ukukhokhisa ngesipiliyoni okuqhubekayo wezokwelapha amatoho kanye nezinye izisebenzi zezokwelapha ukubeka e letingemasayizi lahlukene. Indlela ukunquma usayizi zabo?
Kuye kuthiwe ukuthi accrual ngeke ngqo zincike iholo. Kulo ngandlela ngenye ukuthatha iphesenti ezithile lemali lizobonisa ubukhulu nesikhundla ukukhokhelwa. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi sikhuluma okubizwa ngokuthi iholo net - ngaphandle ngaphambilini labelwe izibonelelo, amaphrimiyamu nokubambisana izinkokhelo.
Lokhu okwamanje ayivamile kunakwe ngabasebenzi. Futhi Bayazibuza kwakho kokubili lokho okuqokelekile lincane kakhulu irekhodi yezokwelapha okuqhubekayo. Ukukhokhisa is kubalwa ikhumbula kuphela iholo "angenalutho". Okuningi akukho izimali ezikhokhelwayo by nabezokwelapha angeke laba yisisekelo bamacala.
Iziphi izici okufanele namanje unake? Manje njengoba lonke ulwazi oluyisisekelo mayelana nokuqhubeka ubudala wezokwelapha kanye izici accrual izinzuzo ezengeziwe zaziwa, kungenzeka ukufunda ngaye futhi kulokho kufana izibonelelo nikubeke ezinhliziyweni zenu.
Ngokwesibonelo, bangathembela abasebenzi abasebenza ezikhungweni TB futhi wahlanganyela emkhakheni TB. Ukuze abasebenzi ezinjalo, kukhona imibandela ekhethekile accrual ukukhokhelwa.
Ukukhokhisa ngesipiliyoni okuqhubekayo wezokwelapha itoho, osezingeni eliphasi abasebenzi, kanye abasebenzi lomcoka izikhungo senzelwe uphethwe nokulawula isifo sofuba, kanye phthisiology wafaka izamba ezilandelayo:
30% wemali wathola phakathi neminyaka engu-3 yomsebenzi;
45% - engaphezu kwengu-5;
60% - iminyaka 7 noma ngaphezulu okuqhubekayo umsebenzi nesipiliyoni emkhakheni wezokwelapha.
Antileprosy anti-isifo izikhungo
ukunakwa eyengeziwe okufanele ikhokhwe antileprosy iminyango kanye ejensi adaliwe ukulwa nalolu bhubhane. Kulezi zimo, bonke abasebenzi abhece angabonelela umsebenzi okuqhubekayo emkhakheni wezokwelapha.
Kuphela esimweni sokuqala, inkokhelo eyengeziwe ayikwazi ukudlula 80% yomholo futhi yesibili kukhona umkhawulo 100%. Lena kuphela abasebenzi bezempilo. Zonke ezinye izisebenzi ayikwazi ukuthola amabhonasi, okuzokwenza tente ezingaphezu kuka-50 futhi amaphesenti angu-80, ngokulandelana.
Ngakho kungakanani izisebenzi kudingekile endabeni ethile? Bona angabonelela itoho inkonzo eqhubekayo, kanye nezinye izisebenzi wafaka Ramer 10% ngonyaka ka-umsebenzi ngamunye. Ngakho, ubukhulu esiqondile izinkokhelo empeleni iyokwaziwa ngisho kuphela emva kokuthola ulwazi mayelana iholo esikhathini ezikhungweni ezahlukene.
Kwezinye izimo, kunethemba ukukhokhwa 30% yomholo iminyaka engu-3, kanye accrual 15% olungeziwe ngamunye 2 neminyaka yokusebenza kanzima ukusebenza emkhakheni wezokwelapha. Kodwa lokhu icala olwengeziwe ayikwazi ukudlula 60% nomholo elithi "ubumsulwa". Uma ufaka izibonelelo esinjalo abanolwazi kwezokwelapha okuqhubekayo? Abahola impesheni basuke icala noma cha - ngabe akubalulekile kangako. Into esemqoka ukuthi kwakungenzeka lokhu kubonakala kulezi zimo ezilandelayo:
emsebenzini emaphandleni bese boarding;
uma umsebenzi libhekisela izisebenzi isilinganiso izikhungo azoya;
abasizi yezokwelapha abasebenza emkhakheni wezifo neminyango imithi yangaphakathi emitholampilo;
bezempilo abasebenza emkhakheni lokunakekelwa ekhaya;
zonke ngosihlalo nodokotela wemisebenzi yezokwelapha.
Okuqhubekayo yezokwelapha lomsebenzi - lokhu yinto abasebenzi abaningi kulo mkhakha womsebenzi ukufuna. Futhi ukuzonda ngesizathu esihle. Phela, ngenxa yomsebenzi izisebenzi okuqhubekayo icala ngobukhulu ezithile abanye zimali eziseceleni ezikhokhiswayo.
Yini angalindela ukuba noma imuphi abasebenzi abasebenza emkhakheni wezokwelapha? Ngaphezu kwakho konke, bonke abasebenzi zezempilo kanye nezindawo zokuvikeleka komphakathi? Akunandaba kuleli cala, isipiliyoni esiqhubekayo yezokwelapha emitholampilo yangasese noma ibeke esimweni. Into esemqoka - ukuba khona kwakhe kanye nesikhathi. Bonke abasebenzi abasebenza impilo nokuvikeleka komphakathi, ibhonasi ka-20% wemali kukhokhelwe ezinyangeni zokuqala 26 yomsebenzi kanye 10% ngayinye izinyanga 24 okwalandela yomsebenzi (kodwa hhayi ngaphezulu kuka-30% inani).
Okuqhubekayo umsebenzi wezokwelapha isipiliyoni - iphuzu elibalulekile ngoba labo abahlela basebenza emkhakheni wezokwelapha njalo. Ngaphambili, ngenxa phambili yimuphi zabasebenzi wathembela amabhonasi ezithile, kodwa abekho eRussia namuhla indlela. Ngakho-ke akufanele ukhathazeke kakhulu le ngxenye, uma hhayi umsebenzi unomphela kwezokwelapha sihlelelwe.
Injongo social isimo. injongo Social isimo yesimanje
Izindlela kanye izinhlobo imisebenzi isimo
Umzimba eliphumelelayo ezinqeni namathanga - ukhiye iqine futhi toned kunemisipha yomlenze